सांसदकाे प्रश्नः राज्यको लगानी रहेको नेपाल टेलिकम एनसेलभन्दा कमजाेर ? - Naya Sanchar
सांसदकाे प्रश्नः राज्यको लगानी रहेको नेपाल टेलिकम एनसेलभन्दा कमजाेर ?
१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार २१:३२
काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइको कारणबारे संसदीय समितिले सरकारसंग जवाफ माग गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको बिकास तथा प्रविधि समितिले फोरजी सेवा विस्तारमा चरम ढिलाई हुनुको कारण ७ दिनभित्र लिखित रुपमा समितिमा पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले टेलिकमको सेवा गुणस्तर र प्रभावकारिताको विषयमा आगामी कार्ययोजना ३० दिनभित्र समितिमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
टेलिकमले एक वर्षमा सिमकार्ड वितरण गरेको सीमकार्डको विवरण पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै नेपाल टेलिकमको साझेदारको विषयमा स्पस्ट नीति व्यवस्था गरि त्यसबारे समितिमा जानकारी गराउन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयका सबै खरिद बिक्री प्रतिष्पर्धाका आधारमा हुने बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरुले टेलिकमको सेवाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरुले रणनीतिक साझेदार भित्राउने बिषय लामो समयहुदा पनि पुरा हुन नसक्नुको बारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए ।
एनसेलले टेलिकमले भन्दा राम्रो सेवा दिँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले राज्यको लगानी रहेको नेपाल टेलिकमले त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पशुपति क्षेत्रको “गुरुयोजना”काे विपक्षमा स्थानीय, बस्ती हटाउन खोजेको आरोप
कोरोनाका कारण एक वर्ष पछि धकेलियाे हङकङकाे स्थानीय निर्वाचन